Famerenana ny dingana Osmosis:
Rano mangatsiaka → Paompin-dronono → Sivan'olon-jotra → Sivana karbaona mavitrika → Fanalefaka rano (tsy voatery) → Sivanina mazava tsara → Paompy misy tosika → Osmosis miverimberina → Fandrefesana PH → Tifitra fanadiovan-drano → Paompin-drano → Fametahana pasteurization → Sivana mikroporous → Fivoahan'ny rano .
Fomba fiasa Osmosis miverimberina faharoa:
Rano mangatsiaka → Paompin-drano manta → Sivan-tsivana maro → Sivana gazy karbonika → Fanamontsana rano (tsy voatery) → Sivan-drindrina → Paompy misy tosika → Osmosis miverimberina → Fantson-drano → Fantson-drano → Osmosis miverimberina faharoa (membrane osmosis miverimberina misy fiampangana tsara ny ety ambony) → Toeram-panadiovana rano → Paompin-drano → Mametaka → Fanivanana mikropora → Fivoahan'ny rano.
Fanabeazana dingana voalohany. (Sivanin'ny fasika)
Ny fampiasana sivana fasika quartz multi-medium, tanjona lehibe indrindra dia ny fanalana ny rano misy sediment, manganese, harafesina, kojakoja colloid, maloto mekanika, solida mihantona ary potika hafa ao anatin'ireo 20UM etsy ambony ireo zavatra mampidi-doza amin'ny fahasalamana. Ny turbidity effluent dia ambany noho ny 0.5NTU, CODMN latsaky ny 1.5mg / L, ny atin'ny vy latsaky ny 0.05mg / L, SDI latsaky ny mitovy amin'ny 5. Ny sivana rano dia karazana fizotran'ny "ara-batana - simika", ny rano amin'ny alàlan'ny akora granular rehefa maloto ny rano sivana sy ny fampiatoana ny koloidra. Ny sivana dia fanadiovana rano mahomby ary ny fitsaboana ny dingana lehibe amin'ny fanomanana rano madio dia dingana tena ilaina.
Fanabeazana dingana faharoa (sivana Carbon)
Sivana entona karbaona ampiasaina mba hanesorana ny loko amin'ny rano, fofona, zavamananaina simika sy biolojika marobe, mampihena ny sisan'ny fandotoan'ny rano sy ny bibikely ary ny loto manimba hafa.
Ny firafitry ny sivana karbaona mihetsiketsika sy ny sivana fasika quartz, ny fahasamihafana dia napetraka ao anatin'ny fahafahan'ny adsorption mahery ny carbon activated ho an'ny fanesorana ny sivana fasika quartz raha tsy misy sivana mivoaka ireo zavatra voajanahary, adsorption of residual chlorine ao anaty rano, mampiasa rano mihoatra ny kely raha oharina amin'ny klôro 0,1ML / M3, SDI latsaky ny mitovy amin'ny 4, dia klôro oxidants mahery, misy karazana fahasimban'ny membrane, indrindra fa ny fonosana osmosis miverimberina dia mora tohina kokoa amin'ny klôro. Ho fanampin'izany, ny fizotran'ny fampahavitrihana, ny velaran'ny karbaona ampandehanana mba hamorona faritra tsy misy kristaly amin'ny vondrona miasa misy oksizena sasany, ireo vondrona miasa ireo dia mety hanana adsorption simika an'ny oxidation catalytic catalytic activated an'ny vaovao ratsy, hamerenana amin'ny laoniny ny zava-bita, afaka mandaitra esory ny ion-by maromaro amin'ny rano.
Fanabeazana dingana fahatelo (fanalefahana resin)
Resina cationic ampiasaina amin'ny fanalefahana rano, indrindra hanesorana ny hamafin'ny rano. Ny hamafin'ny rano dia singa calcium (Ca2 +), magômazy (Mg2 +), raha misy ny ion-n'ny rano mangatsiaka amin'ny alàlan'ny sosona resin, ny rano an'ny Ca2 +, Mg2 + dia natakalo adsorption resin, sy zavatra hafa Mandritra izany fotoana izany ny kalitaon'ny famotsorana ny sodium Na + ions dia mikoriana avy amin'ny softener ao anaty rano dia esorina amin'ireo ion-tsiranon'ny rano malemy. Mba hialana amin'ny fomba mahomby amin'ny fanodikodinan'ny membrane osmosis. Ny rafitra dia afaka miverina ho azy, ary toy izany koa ny mena.
Fanabeazana dingana fahaefatra (sivana Micron)
Ny haben'ny potika ao anaty rano hanesorana sombintsombiny tsara, ny sivana fasika dia afaka manala poti-koloolo tena kely ao anaty rano, hany ka nahatratra 1 degre ny fikorontanan'ny rano, nefa mbola isaky ny milliliter ny rano ho an'ny zato an'arivony ny haben'ny sombin-kazo miisa 5,5 microns, ny fanerena an'ity sivana ity hanala ny rano aorian'ny haben'ny zana-bary 100 microns na latsaky ny sombintsombiny kely, mba hampihenana bebe kokoa ny fihoaram-pefy, hihaonana amin'ny dingana manaraka amin'ny fitakiana rano amin'ny fiarovana ny fizotrany maharitra manaraka.
Ny fitaovana Reverse Osmosis dia fitaovana hanadiovana ny ranon-tsiranoka amin'ny fiasan'ny fahasamihafana amin'ny tsindry amin'ny membrane semi-permeable. Izy io dia antsoina hoe osmosis mihodina, satria mifanohitra amin'ny fitarihana fidirana voajanahary izany. Ny fitaovan'ny fahasamihafana dia misy fanerena osmotic samihafa.
Ny osmosis mifamadika dia afaka manala mihoatra ny 97% ny sira mety levona ary mihoatra ny 99% ny colloid, microorganism, poti ary akora biolojika, nanjary fitaovana safidy safidy voalohany tsara indrindra amin'ny injeniera ny rano voadio maoderina, rano madio sy rano madio ary habakabaka malalaka. (Rano voadio tsara). Ny fiasa manasongadina indrindra dia ny fanjifana angovo ambany, tsy misy loto, teknika tsotra, rano avo lenta ary fandidiana sy fikojakojana mety.
RO miaraka amin'ny tanky fanasan-dàlana mifamadika-RO no ivon'ny rafitra fitsaboana rano, noho izany dia namboarinay ny fitoeran-drano fanasan-damba amin'ny fanadiovana ny ao anaty RO mba hiasa maharitra ny fonon'ny RO.
Previous: Masinina tsy misy emulsifying emulsifying
Manaraka: Tavy vy